Chate Sat | Reliable freelancers for your business *OFFICIAL... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
*OFFICIAL PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT!*
Today Chate Sat Freelancing Platform is pleased to announce it’s official partnership with Peak Point Academy which is one of the famous institutes in translation industry. Our officially signed MOU outlines that by combining our translation and freelance communities, we will motivate, empower and inspire young freelance translators across Myanmar to then bring positive future ahead.
ချိတ်ဆက်နဲ့ Peak Point Academy တို့ တရားဝင်ပူးပေါင်းခြင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ကြေညာဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီလိုပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းဟာ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်လုံးမှာရှိတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင် Freelance Translator အသိုင်းအဝိုင်းကို ပေါင်းစည်းပေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာနဲ့ အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်လို့ ဒီပူးပေါင်းမှုကနေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲက လူငယ်များနဲ့ Freelancer တွေအတွက် တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်သစ်များကို သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Peak Point Academy ကတော့ ထူးချွန်တဲ့ Translator တွေကို မွေးထုတ်ပေးရာ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းမှုရဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ Endorsement Program: Translation ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ Peak Point Academy မှ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ သင်တန်းဆင်းများကို ချိတ်ဆက်မှာ အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ် Endorsement Badge ထုတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ သင်တန်းဆင်းများအတွက် အလုပ်အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာ ဖြစ်သလို၊ အလုပ်အခွင့်အလမ်း ပေးအပ်လိုသူတွေအတွက်လည်း အရည်အချင်းမီ အလွတ်တန်း ပညာရှင်များနဲ့ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် ချိတ်ဆက်နိုင်စေမှာပါ။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Peak Point Academy နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Freelance Translator တွေ အားလုံးရဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ Certification Program တစ်​ခုကို စီစဉ်​ထားပါတယ်​။ ဒီ Program ရဲ့ အ​သေးစိတ်​ကို​တော့ မကြာမီမှာ ​ကြေငြာ​ပေးသွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
#PeakPoint #ChateSat #1FreelancingPlatform #Partnership